Afhayeenkii madaxweynaha Hirshabelle oo is casilay – Balcad.com Teyteyleey
Afhayeenkii madaxweynaha Hirshabelle oo is casilay
Afhayeenkii ahna la taliyihii Madaxweynaha Hirshabelle ayaa shaqada iska casilay, kaddib markii sida uu sheegay uu soo kala dhex galay khilaaf ku saabsan magacaabista golaha Wasiirada cusub maamulkaasi dhowaan ku dhawaaqayo.
Maxamed Shiine afhayeen iyo la taliyaha Madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabelle ayaa sheegay in Madaxweyne Maxamed Cabdi Waare go’aansaday inuu bannaanka ka keeno golaha Wasiirada cusub, taasi oo uu sheegay inay meesha ka saareyso ballanqaadkii xildhibaanka Baarlamaanka Hirshabelle uu u sameeyay inuu Golaha Wasiirada ka qaadanayo baarlamaanka gudihiisa.
“Raalli kama ahi xildhibaanada saaxibadey ah la siyaasadeeyo” ayuu yiri Maxamed Shiine oo sheegay in Madaxweynaha u dhaqmayo sidii dalka kale inuu maamulayo, isagoona sheegay in Madaxweyne Waare u muuqdo nin ballanta baxay xildhibaanadii isaga u ololeeyay.
Dhinaca kale Maxamed Shiine ayaa ku ammaanay Madaxweyne Ku xigeenka maamulka Hirshabelle oo uu sheegay inuu u taagan tahay horumarka maamulkaasi iyo istiraamka Dowladda dhexe iyo waliba maamulka Hirshabelle, iyadoo is casilaada afhayeenka maamulkaasi ku soo beegmeyso xilli dhaqdhaqaaqyo siyaasadeed oo xoogan ay ka socdaan magaalada Jowhar.
The post Afhayeenkii madaxweynaha Hirshabelle oo is casilay appeared first on Ilwareed Online.